GỤỌ NKE Albanian Arabic Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Rarotongan Romanian Samoan Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese
Ọ̀ dị ihe a pụrụ ime ma ọ bụrụ na o kweghị Onye Kraịst e tere mmanụ nke ahụ́ na-adịkwaghị ike omume ịbịa ememe Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị mgbe ọgbakọ na-eme ya?
Ee. Ọ dị ihe a pụrụ ma kwesị ime n’ihi ọnọdụ nke Onye Kraịst e tere mmanụ bụ́ onye ahụ́ na-adịkwaghị ike nke na-adịghị esi n’àkwà ebili ma eleghị anya, n’ihi ya kwa, ghara inwe ike ịnọ ya mgbe ọgbakọ na-eme Ememe Ncheta ọnwụ Kraịst. N’ọnọdụ dị otú ahụ, òtù ndị okenye pụrụ ime ndokwa ka otu okenye ma ọ bụ Onye Kraịst ọzọ tozuru okè bụ́ nwoke wegara onye ahụ kwere ekwe achịcha na mmanya ahụ bụ́ ihe nnọchianya n’otu anyasị ahụ tupu anyanwụ awaa.
Na-adabere n’otú ihe si dị, onye okenye ma ọ bụ nwanna nwoke ọzọ ahụ gara leta ya pụrụ ikwu okwu dị mkpirikpi ma gụọ akụkụ Akwụkwọ Nsọ kwesịrị ekwesị. Ọ pụrụ ịgbaso ụkpụrụ Jizọs tụpụtara mgbe O guzobere Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị. Dị ka ihe atụ, ọ pụrụ ịgụ Matiu 26:26 ma nye ya achịcha ahụ na-ekoghị eko mgbe e kpesịrị ekpere. Nke ahụ gasịa, nwanna nwoke ahụ letara ya pụrụ ịgụ Matiu isi 26, amaokwu 27 na 28, ma bunye ya mmanya ahụ mgbe e kpesịkwara ekpere ọzọ. Ọ pụrụ ikwu okwu dị mkpirikpi banyere ihe ihe nnọchianya nke ọ bụla pụtara, ọ ga-ekwesịkwa ekwesị ikpe ekpere mmechi.
N’ezie, e kwesịrị ime mgbalị nile ezi uche dị na ya iji nọrọ ya mgbe ọgbakọ na-eme ememe Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị. Ma gịnị ka a pụrụ ime n’ọnọdụ dị oké njọ nke metụtara Onye Kraịst e tere mmanụ bụ́ onye na-arịasi ọrịa ike, nke nọ n’ụlọ ọgwụ, ma ọ bụkwanụ, n’ihi ihe ọ bụla ọzọ, bụrụ onye e gbochiri iso mee Ememe Ncheta ahụ mgbe anyanwụ dasịrị na Naịsan 14? Onye dị otú ahụ e tere mmanụ pụrụ ịgbaso ụkpụrụ a gbasoro n’Iwu Mozis ma mee ememe ncheta ahụ nanị ya ụbọchị 30 mgbe e mesịrị.—Ọnụ Ọgụgụ 9:9-14.